Baarlamaanka Carabta Oo Taageero Siinaya Soomaaliya. • Oodweynenews.com Oodweyne News | Oodweynenews.com Oodweyne News
Baarlamaanka Carabta Oo Taageero Siinaya Soomaaliya.
Bayaanka lagu Taageerayo Soomaaliya oo gundhig u ah Horumarka dhinacyada badan leh ee ay Dowladda Federaalka Soomaaliya sameysay ayaa mar kale lagu caddeeyay in ay Jaamacadda Carabtu Difaaceyso Qaranimada iyo midnimada Soomaaliya, waxaana lagu cambaareeyay faragalinta shisheeye ee Wadankaas Lagu Hayo.
Ururka Jaamacadda Carabta ayaa horay u Taageeray Horumarrada ay sameysay Dowladda Soomaaliya, iyadoo ka hor timid faragelinta banaanka kaga imanaysa, taas oo dhaawac ku ah Qarannimada Soomaaliya. Ayaa lagu yidhi Bayaanka